Ihowuliseyili ZBG Uhlobo lweperipheral Transmission Mud Scraper Manufacturer and Supplier |JINLONG
Uhlobo lwe-ZBG lwe-peripheral drive scraper yodaka kunye nomatshini wokufunxa ikakhulu ubandakanya umqadi ophambili (i-truss beam okanye ipleyiti esongiweyo), i-weir ephuphumayo, isixhobo sokuhambisa, isilinda sokuzinzisa, itanki yodaka ephakathi, itanki yokukhupha udaka, i-scraper, isixhobo sokufunxa udaka, Ukuqokelelwa kweScum kunye nokususwa. izixhobo kunye nesixhobo sokuhambisa amandla.
Amanzi azakucocwa angena kumbhobho wokungena wamanzi wesilinda esembindini, athi chu ukuya kwitanki yentlenga ngombhobho wokuqukuqela uzinzisa, aze asasazeke ajikeleze ukuze kubekho intlenga.Amanzi acocekileyo aphuma kumbhobho ophuphumayo kwicala letanki, kwaye intlenga iyakhunyulwa kwaye iqokelelwe ngumkhuhla wodaka.
Ukuya kwi-port yokufunxa i-sludge, ngokomgaqo wokudibanisa umbhobho, i-sludge ephantsi kwetanki ifakwe kwi-tank yokukhupha i-sludge ngokusebenzisa umahluko womgangatho wamanzi;Ingena kwi-cylinder ephakathi nge-siphon kwaye ikhutshwe ngombhobho wokukhupha i-sludge.Ngelo xesha, i-scum kwi-tank iqokelelwa yi-scum scraper kwaye ikhutshwe ngaphandle kwetanki ngebhakethi ye-slag.
Umthamo omkhulu wokucubungula unokugcina indawo yomgangatho.
Isixhobo sikhuhla udaka, sifunxa udaka kwaye sikhuhla i-scum ngaxeshanye, sisebenzisa amandla amancinci kwaye malunga ne-50% yokonga amandla xa kuthelekiswa nezixhobo ezichazwe ngokufanayo.Ukukhuhla i-sludge ngelixa ushukuma, i-sludge ekhutshiweyo esebenzayo inoxinzelelo oluphezulu kunye nesiphumo esihle sokukhupha udaka.
I-port ye-scraper suction port ineenzuzo zesakhiwo esilula, akulula ukuvalelwa, ukusebenza okukhuselekileyo kunye nokuthembeka kunye nokugcinwa okufanelekileyo.Ukusebenza okuqinileyo kunye nokulula ukuqaphela ulawulo oluzenzekelayo olupheleleyo.
Idama elinzulu ( m)
Isantya somjikelezo (m/min)
Ngaphambili: I-ZXG Series ye-Central Transimission Mud Scraper
Okulandelayo: Uchungechunge lwe-ZHG lwe-crane scraper, izixhobo zokukhuhla udaka
Uhlobo lwe-ZWN Umatshini WokuHlulwa weNdlela eRotary (Isihluzo esincinci...